अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले एनसीसी बैंकको १० लाख कित्ता शेयर श्रीमतीको नाममा किनेसंगै नबिल बैंक र एनसीसी बैंक बीच पर्दा भित्र मर्जरको होमवर्क ? - Aathikbazarnews.com अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले एनसीसी बैंकको १० लाख कित्ता शेयर श्रीमतीको नाममा किनेसंगै नबिल बैंक र एनसीसी बैंक बीच पर्दा भित्र मर्जरको होमवर्क ? -
famous creative writing majors can an analytical essay be written in first person creative writing level2creative writing ofasunset what to do when doing homework traduzione in inglese do your homework i need to pay someone to do my homework research paper writing services in bangalore creative writing mist pie corbett creative writing rsm dublin homework help pictures for creative writing ks2 english literature and creative writing creative writing seagulls trouble doing homework chronological order of research proposal the cambridge introduction to creative writing by david morley custom writing pad holder creative writing of art thesis help ireland curriculum vitae help self help homework best essay writing service website list of powerful verbs for creative writing most prestigious creative writing programs case study price support auburn university creative writing creative writing at stanford doing homework gif anime thank you for doing my homework
अर्बपति उद्योगी विनोद चौधरीले एनसीसी बैंकको १० लाख कित्ता शेयर श्रीमतीको नाममा किनेसंगै नबिल बैंक र एनसीसी बैंक बीच पर्दा भित्र मर्जरको होमवर्क ?
नेपालको पूरानो सक्षम र सबल बैंक नबिल बैंक लिमिटेड र आधाँ दर्जन विकास बैंकलाई मर्जर गरि आक्रमक व्यापार गर्दै आएको एनसीसी बैंक लिमिटेड बीच मर्जरको पर्दा भित्र होमवर्क भइरहेको फेला परेको छ ।
नबिल बैंक लिमिटेडको स्रोत नबोले पनि एनसीसी बैंक लिमिटेडको उच्च स्रोतले आर्थिक बजार न्यूज डटकमसंग खुलेरै भन्यो । नबिल बैंकसंग मर्ज गर्ने बारे भित्री रुपमै छलफल पटक÷पटक भएकै हो । आन्तरिक गृहकार्य केही समयमै सार्वजनिक गर्नेछौं र त्यो परिणाम मुखी नै हुनेछ । उनीले दाबी गर्दै भनेः– छलफलमा ४० प्रतिशत स्वाप रेसियोमा करिब सहमती नै भएको छ नि । उहाँकै शब्द सापटी लिने हो भने यी दुई बैंक बीच निकट भविष्यमा मर्ज नहोला भन्न सकिदैन ।
नबिल बैंकको वार्षिक साधारणसभाले उपयुक्त बैंक वित्तीय संस्थासँग मर्जरमा जानको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार संचालक समितिलाई प्रदान गरिसकेको छ । एनसीसी बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट पनि सोही प्रकारको निर्णय भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
यी दुबै बैंक संचालक समिति स्रोतहरुले भने यी दुई बैंक एकापसमा मर्ज हुने सम्भावना अधिक रहेको छ । अहिलेसम्म दुबै बैंकले गोप्य रुपमा विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको भेटिएको छ ।
नबिल बैंक र एनसीसी बैंकबीचको स्वाप रेसियो पनि तय भएको देखिन्छ । ‘नबिलसँग मर्जरमा जादा स्वाप रेसियो कति हुने भन्ने पनि तय भइसकेको छ, बाँकी कुरा छिट्टै सार्वजनिक हुँदैछ,’ एनसीसी बैंक स्रोतले पंक्तिकारसंग खुलेरै भन्यो ।
दुबै बैंकले शाखा सञ्जालको फाइदाले गर्दा आफूलाई अघि बढाउन सके भन्ने विश्लेषण नबिल बैंकको छ । ग्लोबल आईएमई बैंकको काठमाडौं उपत्यकामा ५९ र उपत्यका बाहिर २०५ गरी २ सय ६४ शाखा छन् । यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकको ३३३ वटा शाखा कार्यालय छन् ।
एनसीसी बैंकले भने ४० प्रतिशत स्वाप रेसियो हुनुपर्ने माग गरेको स्रोतको दाबी छ । अहिले एनसीसी र नबिल बैंकबीचमा स्वाप रेसियोमा कुरा मिलेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
अहिले नबिल बैंकलाई एनआइसी एसिया बैंकले जितिसकेको भन्दा फरक पदैन । ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि आफूलाई पछि पार्ने डर नबिल बैंकको छ । यी दुबै बैंकले शाखा सञ्जालको फाइदाले गर्दा आफूलाई अघि बढाउन सके भन्ने विश्लेषण नबिल बैंकको छ ।
ग्लोबल आईएमई बैंकको काठमाडौं उपत्यकामा ५९ र उपत्यका बाहिर २०५ गरी २ सय ६४ शाखा छन् । यस्तै, एनआईसी एसिया बैंकको ३३३ वटा शाखा कार्यालय छन् ।
नबिल बैंकको शाखा संख्या ११९ छ भने एनसीसी बैंकको शाखा संख्या १२७ छ । नबिल आफैले शाखा खोलेर यी दुई बैंकको हाराहारीमा पुग्न समय लाग्ने विश्लेषण गर्दै उसले एनसीसीलाई आखाँ लगाएको स्रोतको दाबी छ । यस्तै, एनसीसी बैंकसँग भएको अचल सम्पत्ति पनि नबिलको लागि अर्काे आकर्षणको केन्द्र हो । भन्दा फरक पर्दैन ।
चौधरीको स्वामित्वमा रहेको एनबी इन्टरनेशनलको नाममा नबिल बैंकमा ५० प्रतिशत सेयर रहेको देखिन्छ । सारिका, छोरा निर्माण चौधरी सहित परिवार सदस्यको नाममा थप करिब ३ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
अहिले दोस्रो बजारमा नबिल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिब १२ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ भने एनसीसी बैंकको सेयर प्रतिकित्ता करिब ४ सय रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नबिल बैंक र एनसीसी बैंक मर्जरको छलफल भएकै बेला नबिल बैंकका प्रमोटर विनोद चौधरीले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकमा विनोद चौधरीले प्रवेश गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । उनले श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा करिब १० लाख कित्ता सेयर किनेको भेटिएको छ ।
नबिल र एनसीसी बैंक मर्जरको तयारीमा रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेको बेलामा विनोद चौधरीले ठूलो मात्रामा सेयर किनेका एनसीसी बैंक सम्बद्ध स्रोतले बतायो ।
‘सारिका चौधरीको नाममा १० लाख कित्ता सेयर एनसीसी बैंकको देखिएको छ । उनले बुक क्लोज हुनुभन्दा एक साता अगाडिको उक्त सेयर किनेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।
विनोद चौधरीले श्रीमतीको नाममा करिब १० लाख कित्ता र अरुको आफन्तहरुको नाममा करिब ८ लाख कित्ता सेयर किनेको छन् भन्दा फरक पर्दैन । चौधरीको प्रवेशअघि बैंक सञ्चालक समितिमा को(को जाने भन्नेमा चर्को प्रतिस्पर्धाको वातावरण रहेको तर चौधरी
साधारणसभा र लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि बैंकले पुस २१ गते बुक क्लोज गरेको थियो । चौधरीले सेयर किन्दाको समयमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१२ देखि ३६४ रुपैयाँ रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । चौधरीले कम्तिमा ३५ करोड रुपैयाँ एनसीसी बैंकको सेयरमा लगानी गरेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । चौधरीले सेयर किनेपछि एनसीसी बैंकमा हलचल नै मच्चिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
एनसीसी बैंक नबिलमा मर्ज गराउन शुरुमा लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठले पहल गरेको र एनसीसीको सेयर किनाउन भने निर्मल प्रधानको भूमिका रहेको एनसीसी बैंकको उच्च स्रोतको दाबी छ । विनोद चौधरीले श्रीमतीको नाममा करिब १० लाख कित्ता र अरुको आफन्तहरुको नाममा करिब ८ लाख कित्ता सेयर किनेको छन् भन्दा फरक पर्दैन । चौधरीको प्रवेशअघि बैंक सञ्चालक समितिमा को(को जाने भन्नेमा चर्को प्रतिस्पर्धाको वातावरण रहेको तर चौधरीले सेयर किनेको देखिएपछि एकाएक बैंक सञ्चालक समिति चयनमा सर्वसहमतिको वातावरण बनेको भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
निजी क्षेत्रका दुई पुराना बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्ज तयारी र एनआईसी एसिया बैंक को प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो बैंक नबिल बैंकले आक्रामकरुपमा कारोबार विस्तारका लागि एनसीसी बैंकसंग मर्जर गर्न खोजी रहेको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
नबिल बैंक लिमिटेडलाई आक्रामकरुपमा अगाडि बढाउनका लागि नबिल बैंकले पहिला नै व्यवस्थापनमा जुझारु युवा बैंकरलाई समेटिसकेको छ । अव सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय गरेमा यस बैंकले फेरि एक नम्बरको पुरानो ताज फिर्ता लिनेछ । एनआईसीले प्रतिस्पर्धामा चुनौती दिन थालेपछि पुरानो हैसियत प्राप्त गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मर्जमा जाने पक्कापक्की भैसकेको छ र डीडीएसमेत सकिएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
मर्जको अझ ठूलो र महत्वपूर्ण फाइदा शाखा सञ्जाल हो र त्यो पनि मजबूत हुने भएकोले मध्यम ठूला बैंकसँग नबिल बैंकले प्राथमिकता दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ नबिल बैंकसंग मर्जर भए एनसीसी बैंकको उच्च कर्मचारीहरु मिलान गर्न खासै समस्या नरहेको एनसीसी बैंकका सीइओ रमेश राज अर्याल डिपुटी सीइओ बन्न तयार रहेको स्रोतको दाबी छ ।
कारोबार विस्तारमा एनआईसी बैंकले सबै बैंकलाई उछिनिसकेको र हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पनि मिल्ने भएपछि अव नबिल बैंक पार्टनर खोज्न बाध्य भएको हो भन्दा फरक नहोला । सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भने व्यापार विस्तार र नाफाको हो । ब्याजदरको स्प्रेड सम्बन्धी नियम मर्ज भएका बैंकलाई नलाग्ने भएकोले ठूलो नाफाको दृश्य अहिले नै देख्न सकिन्छ जसले बैंक मर्जरलाई प्रोत्साहित गरेको छ । पोर्टफोलियो ठूलो हुने र ठूलो पोर्टफोलियोमा स्प्रेडको सुविधा लिन पाउँदा मुनाफा धेरै नै हुनसक्ने देखिन्छ ।
मर्जको अझ ठूलो र महत्वपूर्ण फाइदा शाखा सञ्जाल हो र त्यो पनि मजबूत हुने भएकोले मध्यम ठूला बैंकसँग नबिल बैंकले प्राथमिकता दिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ नबिल बैंकसंग मर्जर भए एनसीसी बैंकको उच्च कर्मचारीहरु मिलान गर्न खासै समस्या नरहेको एनसीसी बैंकका सीइओ रमेश राज अर्याल डिपुटी सीइओ बन्न तयार रहेको स्रोतको दाबी छ । सचेत भया ।
भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङले धरौटी नबुझाए जेल जान सक्ने
डिशहोम सिनेमाघरमा कबड्डी कबड्डी कबड्डी
सिटिजन्स बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतमा
लुम्बिनी विकास बैंकको खुद नाफा साढे १५ प्रतिशतले बढ्यो